Kheyre oo laaluush ku raadinaya la kulanka Madaxda Kenya - Awdinle Online
Kheyre oo laaluush ku raadinaya la kulanka Madaxda Kenya
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maalmahaan ku sugan Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa uu halkaasi ka wadaa qorsho uu ku doonayo in uu kula kulmo Madaxda dalkaas.
Wararka ay heleyso Shabakadda Wararka Awdinle Online ayaa waxaa ay sheegayaan in Kheyre uu laaluusha farabadan ku bixinayo sidii uu ula kulmo lahaa Madaxda Kenya, maadaama xilkii Ra’iisul Wasaarenimo laga qaaday waqti badana aysan siineyn.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in saacadihii la soo dhaafay Hotelka uu ka degan yahay Magaalada Nairobi uu kula kulmay Afar kamid ah Xildhibaannada Baarlamaanka Kenya si ay ula kulan siiyaan madaxweyne Uhuru kenyatta iyo Madaxda kale ee dalkaas.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ololihiisa musharaxnimo ee Madaxweynaha Soomaaliya waxaa uu ka bilaabay dalalka deriska la ah Soomaaliya, waxaana uu dhawaan tegay dalka Jabuuti, isaga oo la kulmay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Previous articleNatiijo kasoo baxday baaritaan labaad oo la marsiiyay Meydka Cali Khaliif
Next articleCiidamo ka wada tirsan Doadda oo Muqdisho ku dagaalamay